Ugu Weyn Ee Jam
Sida loo karsado macaanka maskaxda: Tallaabo tallaabo tallaabo leh sawiro
Wax qarsoodi ah maahan in tufaaxa inta badan la cuno. Hase yeeshee, hooyooyinka intooda badani waxay bartay inay ku karsadaan macaanka soodhada leh ee laga helo miraha liinta. Waxay soo baxday ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale faa'iido leh carruurta iyo dadka waaweyn. Interestingly, for samaynta macaanka, waxaad u isticmaali kartaa oo kaliya ma aha oo kaliya ee miro laftiisa, laakiin sidoo kale ay qolof ah.
Feijoa macaanka: sida loo kariyo, cuntada, faa'iidooyinka
Berry feijoa berry ayaa dhawaan soo muuqday on shelves dukaamada our. Oo waxaa soo jeestay in miro ayaa dhadhan ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale sida hindisada iyo macmacaan udgoon, taas oo sidoo kale keentaa faa'iido weyn u leh jirkeena. Aynu ogaano waxa qiimaha alaabtan ay tahay iyo sida ugu fiican ee loo kariyo.
Sida loo kariyo jam zucchini leh liin xilliga jiilaalka
Meelaha jiilaalka ah waxay joogsadeen in ay noqdaan kuwo daruuri ah, laakiin wax yar ayaa ah muusiggu diyaar u yahay inuu diido. Ka dib, cunnooyinka qasacadaysan ee guriga waxay inta badan ka caawiyaan inay miiska saaraan ama inay kala-duwanaadaan cuntada qoyska. Baro sida wax loo karsado sabiibta zucchini iyadoo lagu darayo liinta - kuwa la jecel yahay ee la jecel yahay awooddaada culus.
Sida loo sameeyo macaanka jucarka iyo juuska ee xilliga jiilaalka
Dad yar ayaa og in markii ugu horeysay ee dadka Hindida ah, oo ku noolaa xeebta casriga ah ee Mexico, ay bilaabeen inay cunaan zucchini markii ugu horeysay. Maanta, macmacaan caan ah waa zucchini macaanka, taas oo badanaa lagu daraa liinta ama liin. Malakaydhka Zucchini waa mid aad u fudud in lagu jahawareeriyo macaan.
Shaaha ayaa ka soo baxday tufaax, marka lagu daro carafka cajiibka ah iyo guryaha dawooyinka, sidoo kale waxay noqon karaan wax aad u fiican oo caano ah oo macaan iyo macaan. Maqaalkani waxaan eegeynaa sida si habboon loo diyaariyo, oo u akhri cuntada cuntooyinka asaasiga ah. Qodobada faa'iidada leh ee macaanka roodhada Rabshaha Rose waxaa ku jira walxo badan oo faa'iido u leh caafimaadka aadanaha.
Maydhis miisaan leh oo diirran guriga dhexdiisa
Macaanka roodhida wuxuu noqonayaa mid caan ah sanad walba. Marka waxaa loo tixgeliyaa inay ku dhow dahay, laakiin hadda waxay si ammaan ah u soo gashay cuntokeena marka lagu daro noocyada caadiga ah ee raaxadaas. Oo gabi ahaanba maaha wax aan micne lahayn. Waxyaabahan dhalaalaya oo macaan leh waxay u fiican tahay cunto karinta. Iyo diirka ayaa ka dhigi doona tan ugu caansan vitamiin iyo macaadin.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Jam 2019